Habboon ma Jinbaa?Q2AAD
Albaabka shabbaga ah, ee geedka Xayaabka ahi isku marmaray ayaan laba farood ku riixay, horenna waan u galnay, halkaa kolkaan dhaafay, ee kaabbada afarta lakab ah, ee guriga hore u sii gashana aannan cagta saarin ayuu wadnuhu i boodbooday, baqdin, argagax iyo cabsi wada socda ayaa hal mar igu wada kulmay. Intaan jidhidhicooday, oo feejignaan xooganna aan galay, ayaan hakaday. “Isdaji! Wax dhiba ma jiraan, waa anniga iyo adiga oo qudha.”, ayay dabbadayda ka tidhi Habboon, “Maxaad dareentay?”, ayaan la soo booday, “Hore u soo soco” ayay tidhi, iyadoon iiga jawaabin wayddiintaydii.“Woow! Kani waa guryihii boqortooyadee?” , ayaan iska yidhi, anigoo indhaha taagtaagaya. “Maaha, ee waa gurigii Habboon”, ayay igu soo celisay, hadalkii ayay sii wadatay, “Qolkan fadhiga sii fadhiiso, oo telefishankan sii daawo laba koob oo Shaaha ayaan inoo keeniye”, Shaah kolkaan maqlay ayaan yidhi, “Anniga Sharaab iiga dhig” sidii meeshu meherad tahay, “Noocee?” ayay tidhi, “Caano walaal” ayaan ku yidhi.